Koorsooyin iyo barnaamijyo
Dhammaan waxbarashooyinka jaamacaduhu waxay ka koobanyihiin koorsooyin. Waxaad dooran kartaa in aad dhigatid koorsooyin xur ah iyo in aad adiga naftirkaagu koorsooyin isugu geegeysatid si ay shahaaddo jaamacadeed u noqdaan. Ama waxaad markaa dooran kartaa in aad barnaamij dhigatid halkaas oo ay jaamacaddu horay u go’aamineyso koorsooyinka barnaamijka ku jiri doona. Dhammaan barnaamijyadu waxay ku gaarsiinayaan shahaaddo jaamacadeed. Laakiin haddii aad koorsooyin dooratid waa in aad adigu koorsooyinkaas kala duduwan isugu geysataa shahaaddo jaamacadeed. Marka aad barnaamij gashid boos ayaad ka heysataa dhammaan koorsooyinka ku jira barnaamijka. Haddii aad koorsooyin xur ah dhiganeysid waa in aad codsataa oo laguu qaataa koorso kasta inta waxbarashadu ay socoto.
Wax ku baro si waqti ahaan buuxda, waqtiga barkiisa ama fogaal wax ku dhigasho?
Waxbarashooyinka badankooda waxaa lagu bixiyaa waqti buuxa. Taasoo ka dhigan ku dhawaad 40 saacadood oo waxbarasho ah usbuuciiba. Laakiin waxbarashadu waxay xitaa yeelan kartaa hannaan socod kale oo waxbarasho. Tan ugu caadiyeysan, haddii aadan waqti buuxa wax dhiganeynin waa waqtiga barkiisa (50 %). Waxbarashooyinka qaarkoodna waxaa sidoo kale lagu bixiyaa fogaal-dhigasho. Waxbarasho fogaal-dhigasho ah waxay ka dhigantahay in aad gurigaaga wax ku dhigan kartid ama xarun waxbarasho oo degmadaada ku taalla. Xarumaha waxbarashada badankoodu waxay leeyihiin hagayaal waxbarasho- iyo xirfadeed oo ku siin kara talooyin iyo taageero. Qaar waxbarashooyin fogaal-dhigashada ka mid waxaa khasab ah in aad kulamo dhawr ah jaamacadda uga qeyb gashid, qaarna taa looma baahna.
Shahaaddo iyo dhibcooyin jaamacadeed
Dhammaan jaamacaduhu waxay ku siinayaan tiro dhibco ah oo jaamacadeed. Hal xilli dugsiyeed oo si buuxda wax loo dhigto wuxuu ku siinayaa 30 dhibcood, hal sanana 60 dhibcood oo jaamacadeed. Barnaamijka heerka hoose badanaa waa seddax sano, 180 dhibcood oo jaamacadeed. Haddii aad sii dhigatid hal sano oo dheeraad ah ama laba sano waxaa taas lagu magacaabaa heer horuumarsan. Waxaad dhiganeysaa 60 ama 120 dheeraad ah oo dhibco jaamacadeed ah.
Imtixaan kama dambeys ah – imtixaan jaamacadeed
Imtixaan jaamacadeed (imtixaan sameyn) waa imtixaan aad sameyneysid dhammaadka koorsada, wuxuuna noqon karyaa mid qoraal ah ama mid afka ah. Imtixaannada waxaa sidoo kale lagu bixin karaa qaab imtixaan guri ah kaas oo aad guriga fadhiisaneysid, hawlna aad ku qabaneysid. Mararka qaarkood waxaad ka arday ahaan gudbineysaa shaqooyin kuu gaar ah, shaqo koox ahaaneed iyo maqaallo cilmi ah. Koorsooyinka qaarkood waxaa sidoo kale lagu sameeyaa sheybaarid. Haddii aadan fursad heysan aad imtixaanka ku sameysid ama haddii aadan imtixaanka ku baasin waxaad xaq u leedahay in aad imtixaan kale sameysid.
Marka aad waxbarashadaada dhammeystiratid waxaad codsan kartaa in shahaaddo jaamacadeed lagaaga soo saaro jaamacadda aad dhigatay. Waxaa jira seddax shahaaddo-jaamacadeed oo kala duduwan: mid guud, mid farshaxan la xiriirta iyo shahaaddo xirfadeed. Waxaa heerka hoose ka jira laba shahaaddo-jaamacadeed oo guud:
Shahaaddo bajolaar ka hooseysa oo laba sano ah
Shahaaddo bajolaar ah oo seddex sano ah
Waxaa intaas dheer in ay jiraan labo shahaaddo-jaamacadeed oo heer horuumarsan ah:
Shahaaddo mastar ah oo hal sano ah
shahaaddo mastar ah oo laba sano ah
Barnaamijka xirfad wax u barashadu wuxuu qofka gaarsiinayaa shahaaddo jaamacadeed oo xirfadeed. Tusaale waxaa kuwa nuucan ah u ah waxbarashooyinka kalkaaliso caafimaad, injineer iyo cilmi nafsiyahan.
Ehel u ah waxbarasho jaamacadeed
Si aad jaamacad u dhigan kartid waa in aad buuxisaa shuruudo aasaasi ah iyo shuruudo gaar ah oo koorsada ama barnaamijka aad codsatay leysaga baahanyahay. Waxaa taas loola jeedaa in aad leedihid aqoonta hordhaca ah ee leeska rabo si waxbarashada aad u dhigatid.
U ehel ahaansho aasaasi ah
Dhammaan koorsooyinka iyo barnaamijyadu waxay leeyihiin shuruudo aasaasi ah. Haddii aad shahaaddo ka heysatid barnaamij waxbarasho jaamacadeed kuu diyaarinaya oo aad ku qaadatay dugsi sare ama waxbarashada dadka waaweyn ee degmada waad buuxisay shardiga aasaasiga ah ee u ehel ahaanshada waxbarasho jaamacadeed Swiidhan gudeheeda. Haddii aad shahaaddo xirfadeed ka heysatid dugsi sare ama waxbarashada dadka waaweyn waad codsan kartaa sidoo kale waxbarasho jaamacadeed. Laakiin markaas waa in aad heysataa shahaaddo aad ku baastay Swiidhishka ama Swiidhishka luqad labaad ahaanta 2 + 3 iyo Ingiriiska 6. Waddan kale ma ka heysataa waxbarasho dugsi sare oo dhammeystiran oo sheegeysa in aad waddankaaga hooyo xaq ugu leedihid waxbarasho sare? Markaas waxaa ilaa heer hubaal u ah in aad Swiidhan wax ka dhigan kartid haddii aad buuxisid shuruudaha luqadda swiidhishka, luqadda ingiriiska iyo xisaabta.
U ehel ahaansho gaar ah
Waxaa intaas dheer in waxbarashooyinka badankoodu ay u ehel ahaansho gaar ah u baahanyihiin. Waxay taasi inta badan ka dhigantahay in ay khasab tahay in aad dhigatay koorsooyin dugsi sare oo go’an, laakiin waxay taasi sidoo kale ka dhignaan kartaa in shuruudo xagga khibradda shaqada ah, tijaabooyin shaqo ama koorsooyin jaamacadeed leesaga baahanyahay. Haddii aad tusaale ahaan codsaneysid waxbarasho dhaqaale waxaad badanaa u bahaantahay in aad dhigatay xisaab dheeraad ah oo ka baxsan tan ku jirta u ehel ahaanshada aasaasiga ah.
Wax dhammeystiro haddii aadan ehel ahaansho lahayn
Haddii aadan u ehel ahaansho heysan waxbaad sii dhigan kartaa si aad wax u dhammeystiratid oo aad markaa ehel ugu noqotid waxbarasho jaamacadeed. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa dugsiyada sar-sare ama waxbarashada dadka waaweyn ee degmada iyo jaamacadaha shacbiga ah. Waxaad xitaa kaalmo ka heli kartaa hage xagga waxbarashada ah.
Ma leedahay wax kale oo ku siinaya ehel ahaansho?
Waxaa laguu arki karaa in aad ehel u tahay in kasta oo aadan buuxin shuruudaha guud ee ehel u ahaanshada, haddii aad sideeda kale leedihid xariifnimo sare oo dhab ah. Waxay tusaale ahaan kartaa aqoon iyo khibrad aad ku kasbatay nolosha shaqada, nolosha ururrada, joogitaan dheer oo dibadda waddanka ah ama koorsooyin aad akhrisatay. Mabda’ ahaan waad xoojin kartaa u ehel ahaanshadaada aasaasiga ah iyo tan gaarka ah labadaba adiga oo aan dugsi sare dhigan adiga oo tix raacaya xariifnimadaada leesu ururiyay. Laakiin waa in aad Antagning.se ka codsataa in la eego xariifnimadaada dhabta ah. Fiiro gaar ah u lahaw in ay khasab tahay in aad sidoo kale raacdid tilmaamooyinka u goonida ah jaamacadaha ee ku aaddan codsiga. Waxay tusaale ahaan taasi ka dhignaan kartaa in ay khasab tahay in loo diro koobi codsigaaga ku aaddan ama in ay u baahdaan waraaqo dheeraad ah. Tilmaamooyinka waxaad ka heli kartaa barta intarneetka ee jaamacadaha.
Imtixaanka gelitaanka jaamacadda
Haddii aad buuxisid shuruudaha u ehel ahaanshada waxaad sii hagaajin kartaa fursadahaaga ku aaddan in aad gashid waxbarashada aad dooneysid adiga oo galaya imtixaanka jaamacad gelidda.
Wax muwaadinnimo, sharci degganaasho ama da’ ah oo leesaga baahanyahay ma jiraan si loo galo imtixaanka jaamacad gelidda laakiin waa in mar walba aad is caddeyn kartaa. Imtixaanka waxaa lagu geliyaa af-swiidhish.
Imtixaanka jaamacad geliddu wuxuu u qeybsanyahay siddeed qeybood, wuxuuna ka koobanyahay 160 su’aalood. Qeybaha oo dhan marka laga reebo fahmidda akhriska ingiriisku waa swiidhish. Sidaas awgeed faa’iido ayey kuu tahay haddii aad aqoon fiican u leedihid afka swiidhishka. Imtixaanku wuxuu ka koobanyahay qeybo aad u baahantihid in aad muujisid sida caqli galka ah ee aad u fikireysid marka laga hadlayo dhibaatooyinka xisaabta la xiriira, fahmidda akhriska ingiriiska, fahmidda akhriska swiidhishka iyo keydka erayada swiidhishka ah. Imtixaanka waxaa la galaa laba jeer sannadkiiba. Macluumaad ingiriis ah oo ku aaddan imtixaanku wuxuu ku jiraa www.studera.nu.
In la codsado waxbarasho sare
Guddiga jaamacadaha, (UHR) ayaa si wada jir ah jaamacadaha mas’uul ugala ah macluumaadka ku aaddan waxbarashooyinka iyo sida aad koorso iyo barnaamij u codsan kartid. Waxaad ka codsan kartaa, akoon aad isticmaashidna ka furan kartaa, dhammaan koorsooyinka iyo barnaamijyada ay waxbarashadoodu swiidhishka tahayna ka dalban kartaa antagning.se. Haddii aad sii jeclaan lahayd in waxa ingiriis lagu dhigo waxaad dooraneysaa, waxbarashadana ka codsaneysaa www.universityadmissions.se.
Haddii aad leedahay aqoonsi la qarinayo, macluumaad shakhsi ah oo aan la kashafi karin ama sabab kale awgeed aadan khadka intarneetka wax uga codsan karin waxaad la xiriiri kartaa UHR si aad caawimaad u heshid.
Macluumaad dheeraad ah oo taas ku aaddan waxaad ka heli kartaa www.studera.nu iyo www.antagning.se.
Haddii aad dooneysid in aad codsatid koorsooyin ama barnaamij swiidhish iyo ingiriis lagu dhigo;
waxaa codsashada la furayaa 15 maarso, maalinta codsiga ugu dambeysa xilli dugsiyeedka deyrtuna badanaa waa 15 Abriil.
waxaa codsashada la furayaa 15 Sebteembar, maalinta codsiga ugu dambeysa xilli dugsiyeedka guguna badanaa waa 15 oktoobar.
Adigaaga doonaya in aad xagaaga wax dhigatid waxay jaamacaduhu hayaan koorsooyin gaa-gaaban oo dhawr ah. Maalinta ugu dambeysa ee koorsooyinka xagaaga la codsan karo waa 15 maarso.
Taariikhyo muhiim ah iyo macluumaad ku aaddan codsashada iyo qaadashadu waxay ku jiraan Antagning.se. Xitaa waa halkaas halka aad codsiga ka sameyneysid. Macluumaadka waxaa lagu heli karaa oo keliya swiidhish.
Haddii aad dooneysid in aad codsatid koorsooyinkeenna iyo barnaamijyadeenna caalamiga ah oo si buuxda ingiriis loogu bixinayo;
waxaa codsashada la furayaa 17 oktoobar, maalinta ugu dambeysa ee la codsan karo ee ku aaddan xilli dugsiyaadka deyrtuna waa 15 jannaayo.
waxaa codsashada la furayaa 1 juun, maalinta ugu dambeysa ee la codsan karo ee ku aaddan xilli dugsiyaadka guguna waa 15 Agoosto.
Waxaad codsigaaga ku sameyneysaa www.universityadmissions.se. Macluumaadka waxaa lagu heli karaa oo keliya ingiriis.
Hage xagga waxbarashada ah
Si wanaagsan oo arrimahaaga aad caawimaad ugu heli kartid marka laga hadlayo waxbarasho jaamacadeed waa in lala hadlo hage xagga waxbarashada ah. Haddii aad dhiganeysid dugsi sare oo swiidhish ah waxaad dugsiga kala xiriiri kartaa-
hage xagga waxbarashada ah. Arrinku waa sidaas oo kale haddii aad dhiganeysid jaamacad shacbi ah ama waxbarashada dadka waaweyn ee degmada. Jaamacad walba oo cilmi baaris leh iyo mid aan cilmi baaris lahayn waxay sidoo kale leeyihiin hage xagga waxbarashada ah oo ay ugu tala galeen ardaydooda.
Waxyaabaha wax lagu muddeysto iyo kala doorasho
Waa waxa aad wax ku muddeysaneysid waxa kala go’ynaya in waxbarashada laguu qaadanayo iyo in kale. Waxay taasi tusaale ahaan noqon kartaa shahaaddo dugsiga sare, natiijo imtixaan jaamacad gelid ama qiimeyn ka socota jaamacad shacbi ah.
Haddii ay jiraan codsadayaal ka badan inta boos ee jirta waxaa la sameynayaa kala doorasho si loo go’aamiyo cidda la qaadanayo. Waxyaabaha aad wax ku muddeysaneysid ayaa kala go’ynaya kooxda ama kooxaha kala doorashada ee aad ku dhaceysid. Haddii aad leedihid waxyaabo badan oo aad wax ku muddeysaneysid, tusaale ahaan shahaaddooyin iyo natiijo imtixaan jaamacad gelid labadaba, waxaa isla mar ahaan lagu gelin karaa kooxo badan oo kala doorasho. In kooxo badan laguugu dhex daro waxay ku siineysaa fursad weyn oo ku aaddan in laguu qaato waxbarashada aad dooneysid.